Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Oktobra 2017 à 14:36
211 octets ajoutés , il y a 4 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Oktobra 2017 à 13:56 (hanova)
k (Fanoratana ny boky ao amin'ny Baiboly katolika)
Endrik'io pejy io tamin'ny 3 Oktobra 2017 à 14:36 (hanova) (esory)
(Raha hijery ny antsipiriany misimisy kokoa dia jereo ny pejy hoe [[Filazantsara]])
Misy efatra ny [[Filazantsara]], dia ny ''[[Filazantsara araka an'i Matio]]'', ny ''[[Filazantsara araka an'i Marka]]'', ny [[Filazantsara araka an'i Lioka]] ary ny ''[[Filazantsara araka an'i Jaona]]''. Atao hoe [[Filazantsara synoptika|Filazantsara mitovy fijery]] (na synoptika) ireo Filazantsara telo voalohany satria mitovitovy sy mifameno ny zavatra lazainy. Matetika ny teny hoe ''Filazantsara'' na ''Vaovao Mahafaly'' dia entina hanondroana ny Testamenta vaovao manontolo. Maro ireo nanoratra filazantsara izay tsy voaray ho ao amin'ny Baiboly kristiana. Ireo no atao hoe [[filazantsara apokrifa]] na evanjely apokrifa.▼
▲Misy efatra ny [[Filazantsara]], dia ny ''[[Filazantsara araka an'i Matio]]'', ny ''[[Filazantsara araka an'i Marka]]'', ny [[Filazantsara araka an'i Lioka|''Filazantsara araka an'i Lioka'']] ary ny ''[[Filazantsara araka an'i Jaona]]''. Atao hoe [[Filazantsara synoptika|Filazantsara mitovy fijery]] (na synoptika) ireo Filazantsara telo voalohany satria mitovitovy sy mifameno ny zavatra lazainy. Matetika ny teny hoe ''Filazantsara'' na ''Vaovao Mahafaly'' dia entina hanondroana ny Testamenta vaovao manontolo. Maro ireo nanoratra filazantsara izay tsy voaray ho ao amin'ny Baiboly kristiana. Ireo no atao hoe [[filazantsara apokrifa]] na evanjely apokrifa.
Marihina fa ny anaran'ny boky ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy ireo naseho eo ambony ireo. Ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy dia mampiasa ny hoe ''Vaovao Mahafaly'' ho solon'ny hoe ''Filazantsara'' ary ny anaran-tsamirery ao amin'ny anaran'ny boky dia ialohavan'ny hoe ''Masindahy'' izay hafohezina amin'ny hoe ''Md''. Ireto ny anaran'ny boky ao amin'ny Baiboly katolika: ny ''Vaovao Mahafaly nosoratan'i Masindahy Matio,'' ny ''Vaovao Mahafaly nosoratan'i Masindahy Marka,'' ny ''Vaovao Mahafaly nosoratan'i Masindahy Lioka'' ary ny ''Vaovao Mahafaly nosoratan'i Masindahy Joany''.
(Raha hijery ny antsipiriany misimisy kokoa dia jereo ny pejy hoe [[Epistily]])
=== Ny Apokalypsin'i Jaona ===
Ny ''[[Apokalypsin'i Jaona]]'', (protestanta), na ''Apokalipsan'i Masindahy Joany'' (katolika) izay tsorina amin'ny hoe ''Apokalypsy na Apokalipsa'', dia boky farany ao amin'ny Baiboly kristiana sy ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ampiana ny anaran'i Jaona (na Joany) ny anaran'io boky io satria maro ny nanoratra apokalypsy izay tsy voaray ho isan'ny Baiboly. Atao hoe [[apokalypsy apokrifa]] izy ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/808597"